Bileyska Puntland oo wali baaraya dil shalay galab ka dhacay magaalada Galkacyo. [Akhris …] – Radio Daljir
Galkacyo, Aug 25 – Ciidanka ammaanka ee Puntland gaar ahaan kuwa magaalada Galkacyo, ayaa illaa shalay galinkii danbe ku raad-jooga nin lagu eedaynayo in uu ka danbeeyey dil toogasho ah oo shalay ka dhacay magaalada Galkacyo.
Ninka ay haatan bileysku ku raad-joogaan ayaa lagu tuhunsan-yahay in uu fuliyey dilkii wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Goobe Cali Xobbar, kaasi oo shalay galab lagu toogtay bartamaha magaalada Galkacyo.
Saraakiisha bileyska oo ay idaacadda Daljir wax ka weydiisay dhacdadaasi iyo cidda lagu tuhunsan-yahay in ay ka danbaysay, ayaa sheegay falkaan dilka ah in uu gaystay wiil uu dhalay guddoomiyihii hore ee gobolka Mudug C/nuur Maxamed Diiriye ?Geesay?, kaasi oo bileysku ay sheegeen in ay ku dabo-joogaan.
Falkaan dilka ah ayaa qayb ka ah, dhacdooyin xiriir ah oo bilihii ugu danbeeyey ka dhacay gudaha magaalada Galkacyo, kuwaasi oo qaarkood lagu dilay wasiirkii warfaafinta Puntland alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac ?Seefta-Bannaanka?, iyadoo isla dhacdadii shalayna lala xiriirinayo in ay salka ku hayso isla arrimahaasi.
Dilkaan shalay dhacay ayaa ku soo beegmay xilli bandow habeenkii ah uu saaran-yahay magaalada Galkacyo isla markaana si weyn loo adkeeyey ammaanka iyadoo ciidamo xooggan dawladdu ay soo dhoobtay magaalada, hase yeeshee ma suuroobin in si sahal ah lagu qabto ciddii dilkaasi gaysatay.
Mas?uuliyiinta ugu sarraysa dawladda Puntland iyo kuwa hay?adaha ammaanka oo wali sugan Galkacyo, ayaa wacad ku maray dhawaan in ay gacanta ku soo dhigidoonaan ciddii ka danbaysay dilkii wasiirkii warfaafinta iyo dilal ka sii horreeyeyba, hase ahaatee wali dawladdu kuma guulaysan wax ka qabashada arrintaasi.